Malite Baby & Nwa Nri & Nlekọta
na-agbanwe agbanwe ute
Nri & Nlekọta isearch - September 17, 2017 0
Epe mpempe mmiri kwesịrị ịdị irè iji mee ka ọ dị mfe. N'ezie, enwerekwa esemokwu, dịka ihe gbasara ya. Ya mere, ...
metụ akwa Bọketị
Nri & Nlekọta isearch - September 5, 2017 0
Ebumnuche ga-abụ otu, ísì apụghị ịhapụ ọpụpụ. Ọnụahịa ahụ adịghị mkpa, dịka ...
soro na-na mmiri ara ehi
Nri & Nlekọta isearch - August 27, 2017 0
N'ihe gbasara ịzụ ụmụ ọhụrụ, mmiri ara nne ka mma. A ghaghị inye nke a ruo ọnwa isii nke ndụ. Site na ...